कुन मुद्रा म भित्र पक्रन सक्छु?
हामी धेरै मुद्रामा समर्थन, ब्राउजिङ र जाँच गर्छौं. तपाईं हाम्रो वेबसाइटको फुटर मा आफ्नो मुद्रा चयन गर्न सक्नुहुन्छ.
यदि मेरो मुद्रा सूचीमा छैन भने के हुन्छ?
चिन्ता नगर्नुहोस्, यदि तपाईँको स्थानीय मुद्रा माथिको सूचीमा छैन भने तपाईँले कुनै पनि मुद्रामा मात्र चेकिङ गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँको बैङ्कले तपाईँको स्थानीय मुद्रामा यो स्वचालित रूपमा रूपान्तरण र चार्ज गर्नेछ!
भुक्तानीको कुन रुपले कुन रुपले स्वीकार गर्नुहुन्छ?
के मैले कुनै भन्सार/आयात शुल्क तिर्नु पर्ने हो?
यो तपाईं बस्ने देश मा निर्भर छ. कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड जस्तै, पार्सल आफ्नो देशमा आएमा भन्सार/आयात शुल्कको विषय हुन सक्छ. तपाईंको आदेश हामीसँग राख्दा तपाईंको सरकारले शुल्क लिन सक्ने कुनै पनि शुल्क तिर्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ. शेकोउ कुनै पनि शुल्कका लागि दायी हुने छैन र हामी ग्राहकले आफ्नो स्थानीय रीतिरिवाजसँग कर्पोरेट गर्न अस्वीकार गरेमा भन्सारद्वारा प्रेषकलाई फिर्ता गर्ने कुनै पनि पार्सल फिर्ता गर्ने छैनौं.
मैले मेरो डिस्काउन्ट कोड मा प्रवेश गर्न बिर्सेछु, यसमा म थप्न सक्छु?
एक पटक एउटा आदेश बनाइएको छ हामीले डिस्काउन्ट कोडहरू थप्ने/संशोधन गर्न सक्दैनौं वा आंशिक रकम फिर्ता गर्न सक्दैनौं. राम्रो खबर छ तपाइले जहिले पनि अर्को पटक प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ.
मलाई डिस्काउन्ट कोड छ, यो बिक्रीमा म प्रयोग गर्न सक्छु?
छैन, बिक्रीमा रहेका वस्तुहरूमा अतिरिक्त डिस्काउन्ट लागू हुन सक्दैन.
तपाईंलाई किन वेटलिस्ट उत्पादन हुन्छ?
अझ दिगो हुन हाम्रो भण्डारमा वेटलिस्ट उत्पादनहरु परिचित गराउन छनौट गरेका छौं.
यो कसरी दिगो हुन्छ?
वेटलिस्ट उत्पादनहरूको परिचय गरेर यसले हामीलाई प्रत्येक उत्पादनको सही सङ्ख्या उत्पादन गर्न अनुमति दिन्छ, ज्यादती मौज्दातको मात्रा घटाउँछ.
तपाईंको समग्र उद्देश्य के हो?
फेसन उद्योगमा फोहोरको कमीमा योगदान पुर्याउने हामी लक्ष्य विश्वको फोहरको ४% हरेक वर्ष उत्पादन प्रक्रियाबाट बन्द-कटौतीबाट आउँछ, ९२ करोड टन, जुन विषाक्त ई-फोहोरभन्दा बढी हुन्छ.
के म मेरो आदेश बदल्न सक्छु?
कृपया हाम्रो कस्टमर केयर टिमलाई यथाशीघ्र इमेल गर्नुहोस्, यदि तपाईँको आदेश जहाजको लागि प्याक गरिएको छैन भने हामी तपाईँको क्रममा परिवर्तन गर्न सक्षम हुन सक्छ, यदि यो धेरै ढिलो भयो भने, यो धेरै ढिलो भयो!
मैले मेरो शिपिंग ठेगानमा प्रवेश गरेको छु-यसलाई कसरी बदल्न सक्छु?
कृपया कस्टमर केयर ठीक टाढा सम्पर्क गर्नुहोस्, यदि तपाईँको आदेश शिल्ड गरिएको छैन भने हामी तपाईँको शिपिंग लेबुलहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ, यदि यो धेरै ढिलो भयो भने तपाईँको पार्सल रिडाइरेक्ट गर्न हाम्रो शिपिङ सेवासँग सम्पर्क गर्न आवश्यक छ. एटीसी. युएसपीएस, एनजेड पोस्ट, अस पोस्ट.
के म मेरो आदेश रद्द गर्न सक्छु?
दुर्भाग्यवश हामी एक पटक राखिएको एउटा आदेश रद्द गर्न सकिरहेका छैनौं.
मेरो आदेशको स्थिति कस्तो छ?
एक पटक तपाईंको आइटम सिप गरिएको छ कृपया शिपिङ पुष्टि ईमेल को लागि ४८ घण्टा सम्म अनुमति दिनुहोला. तपाईं लिन्क मार्फत आफ्नो पार्सल ट्रयाक गर्न सक्नुहुन्छ र यसको सुपुर्दगी अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईँलाई थप अद्यावधिक आवश्यक छ वा तपाईँको क्रमसँग एउटा मुद्दा छ भने कृपया ग्राहक केयरसँग सम्पर्क गर्नुहोस्.
मैले किन दुई पटक चार्ज गरेको थिएँ?
नक्कल शुल्क हेर्ने हो भने कृपया यसलाई केही दिन दिनुहोस् र यो बन्द गर्नुपर्छ र मुद्दा स्वतः सुधार गर्नुपर्छ. तर यदि यो अझै बाँकी छ र तपाईँ सकारात्मक हुनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा आदेश मात्र राखिएको छ, कृपया हामीलाई थप सहयोगका लागि नक्कल इन्चार्जको स्क्रिनसट सहित info@shekouwoman.com मा इमेल पठाउनुहोस्.
मैले आदेश पुष्टि गरेको छैन, मैले के गर्नुपर्छ?
उच्च मागको कारण प्राप्त गर्न कहिलेकाहीँ २४ घन्टासम्म लाग्न सक्ने व्यवस्था छ. यदि तपाईँले २४ घण्टापछि तपाईँको आदेश पुष्टिकरण इमेल प्राप्त गर्नुभएको छैन भने, कृपया तपाईँको जाँचसँग info@shekouwoman.com मा सम्पर्क गर्नुहोस्
हामीले बुझेका छौं कि अनलाइन खरिद गर्ने वस्तुहरू सधैं योजनाबद्ध रूपमा जाने छैन, शेकौ महिला एउटा वस्तु फिर्ता हुँदा भण्डार क्रेडिट प्रदान गर्दछ. हामी रिफ्रेण्ड चढाउँदैनौं. कृपया हाम्रो विवरणको नीति सावधानीपूर्वक पढ्नुहोस् जस्तै तिनीहरू शेकोउ महिलामाथि यहाँ खरिद गर्दा स्वीकार गरिन्छन्. मुख फर्काउनुस् आफ्नो आइटम (UPDATE-COVID-१९ पोस्टेज विलम्ब) प्राप्त भएको १४ दिनभित्र हामीलाई फर्काउनु पर्दछ हामी बुझ्छौं कि फर्कन्छ भन्ने कुरा सामान्य भन्दा लामो समय लाग्नेछ. यसरी हामीले आफ्नो आइटम प्राप्त गर्नबाट ६० दिन सम्म हाम्रो रिटर्न समय बढाएका छौं. यदि तपाईँको खरिद प्रचारात्मक वा स्वतन्त्र वस्तु समावेश गरिएको छ भने यी वस्तुहरू फिर्ता भित्र समावेश गर्नु पर्दछ. कृपया ध्यान दिनुहोस: हामी क्रेडिट नोटहरू मात्र उपलब्ध गराउँछौं, कुनै प्रतिकार छैन. एक पटक हामी आफ्नो प्रतिफल प्राप्त भएपछि कृपया आफ्नो प्रतिफलको लागि २-५ दिन अनुमति दिनुहोस र त्यसपछि तपाईको स्टोर क्रेडिट को विवरण सहित ईमेल प्राप्त हुनेछ. शेकोउ महिलासँग सबै विवादमा अन्तिम अठोट छ, तर उपभोक्ता कानुनअन्तर्गत यो सबै दायित्व पूरा हुनेछ.
यदि तपाईँले प्रतिस्थापन साइज वा वैकल्पिक item/s को आवश्यकता पर्दछ भने, तपाईँले उपलब्ध गराइएको आफ्नो भण्डार ऋणको साथमा नयाँ आदेश राख्नुपर्नेछ. स्टकको छिटो कारोबार गर्दा हामी स्टकमा आफ्नो रुचाइएका आकार/शैली हुने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं.
तपाईं हाम्रो रिटर्न्स फारम डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ ऊRE.
यदि तपाईँले त्रुटिपूर्ण वस्तु प्राप्त गर्नुभएको छ भने कृपया यो हामीलाई फिर्ता गर्नुहोस्. सबै वस्तुहरू फिर्ता र शेकोउ महिलाद्वारा त्रुटिपूर्ण मानिनेछ. फ्याकल्टी आइटमले पहिल्यै पहिलेका ती व्यक्तिहरूलाई समावेश गर्दैन. यदि तपाईँको आइटम त्रुटिपूर्ण भएको छ भने हामी तपाईंलाई प्रतिस्थापन पठाउँछौं. तपाईँले मूल रूपमा आदेश दिएको समान साइज र रंगमा एउटै वस्तु पठाउनु हुनेछ. हामी केवल विनिर्माण भ्रमणका लागि प्रतिस्थापन प्रस्ताव मात्र चढाउँछौं, कलकारखानाहरूमा प्रयास गर्दा उत्पन्न हुने दोष कुनै पनि परिस्थितिअन्तर्गत स्वीकार्य छैन अर्थात् सिममाथि विभाजन हुन्छ.
किन हामी आकार/शैलीको आदान प्रदान गर्न सक्दैनौ
स्टक स्टकको द्रुत कारोबार गर्दा, हामी वस्तुहरूमा स्टकमा आफ्नो रुचाइएका साइज/शैली प्राप्त गर्ने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैनौं न त स्टक नै आरक्षित वा राख्न सकिन्छ.
सामान फिर्ता गर्नका लागि ग्राहकले गरेको जहाजको खर्च नछोएको वा शेकोउ महिलाद्वारा प्रतिष्पर्धी गरिएको छैन. कुनै पनि प्रतिफलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता कानून अन्तर्गत हाम्रो दायित्वलाई शिपिंग शुल्क लिनको लागि जिम्मेवार हुनेछ.
कुनै पनि रद्द, परिवर्तन वा प्रतिष्पर्धालाई एक पटक आदेश दिन सकिने र भुक्तानी प्रक्रिया सकिएको छ.
Orgaising A फर्काउनुहोस्
यदि तपाईँले उपरोक्त आवश्यकताहरू पूरा गर्नुभएको छ भने कृपया १४ दिनभित्र ढाँचामा उपलब्ध ठेगानासँग तपाईँको वस्तु/हरू फिर्ता गर्नुहोस्. हामी कुनै पनि सामाग्रीका लागि दायी हुने छैनौं/हामी उपलब्ध गराउनेबाहेक अन्य कुनै स्थानमा फर्कियो. हामी कुनै पनि स्टोरमा अनलाइन आदेशका लागि प्रक्रिया गर्न सक्दैनौं.
एक्सचेन्ज टाइमलाइन फर्काउँछ
हामी आफ्नो परिश्रमलाई सकेसम्म चाँडो फर्काउन खोज्छौं.
कृपया आफ्नो प्रतिफलको लागि २-५ कारोबार दिन अनुमति दिन्छ र हाम्रो लागि आफ्नो स्टोर क्रेडिट साथ इमेल गर्न अनुमति दिन्छ. सबै स्टोर क्रेडिट इमेल मार्फत पठाइनेछ त्यसैले कृपया तपाईँको इमेल ठेगाना डबल जाँच गर्नुहोस्.
Item/s मौलिक अवस्थामा र मौलिक प्याकेजिङमा हुनुपर्छ. कृपया गार्मेन्टमा प्रयास गर्दा सावधानी अपनाउनु होला, जसबाट हामीले मेकअप गर्ने र पर्फ्युम वा शरीरको गन्धको गन्ध आउने गार्मेन्टहरू स्वीकार नगर्ने.
आइटम/एस लाई कुनै न कुनै तरिकाले घिन, धोएर वा परिवर्तन गरिएको हुनु हुँदैन. शेकोउ महिलाले आफ्नो मौलिक अवस्था वा शरीरको गन्ध/परफ्युमको सुगन्ध नफर्काउने कुनै पनि सामाग्रीको खण्डन गर्ने अधिकार छ र त्यसलाई ग्राहकमा फर्काइने छ.
पि्रस्ड गहना, हेयर एक्सेसरिज, लिङ्री र तैपनी स्वास्थ्य र स्वास्थ्यका कारण फर्कन सकिदैन.
कृपया याद गर्नुहोस् * यदि कुनै गार्मेन्टहरू फर्काइएका छन् जसले हाम्रो प्रतिफलको नीति तोडिन्छ, तपाईँलाई यी गार्मेन्टहरू तपाईँका लागि फर्केको जहाजको लागि जहाजहरूको लागि आह्वान गरिनेछ. न्युजिल्यान्डबाट जहाजको खर्च उच्च छ, यदि तपाईँ यी फिर्ता शुल्क तिर्न तयार हुनुहुन्न भने, गार्मेन्टहरू हामीले यी रिसेल गर्न असमर्थ छौं भनेर दान दिनुहुनेछ.
ग्लासबाट फोन क्यास बनाइन्छ. हाम्रो प्याकेजिङ डिजाइन गरिएको छ त्यसैले ट्रान्जिटमा तोक्ने छैन. तर, आफ्नो फोनबाट मुद्धा हटाउँदा यी सजिलै टुट्न सकिन्छ. कृपया यस का लागि पुन: कोष जारी गर्न नसकिए पनि यस बारे कृपया ध्यान दिनुहोला.
यसको श्रेय प्रशोधित हुनुभन्दा पहिले शेकोउ वुमन द्वारा प्रदान गरिएको ठेगानामा फर्काउनु पर्दछ. हाम्रो रिटर्न एड्रेस हाम्रो विवरणमा बताइएको छ, कृपया यसलाई यो सटीक ठेगानामा फर्काउने निश्चित गर्नुहोस्, यदि यो कुनै अन्य ठेगानामा भेज भएमा हामी फिर्ता स्वीकार गर्न असमर्थ हुनेछौं. मूल भाडाको खर्च र गोदाममा फर्किने गरी अन्तर्राष्ट्रिय उपभोक्ता कानून अन्तर्गत उल्लिखित रूपमा प्रतिष्पर्धामा वा प्रतिकार गरिने छैन. यदि प्याकेज हामीलाई सुरक्षित तरिकाले पुग्दैन भने हामी प्रतिफलको मुद्दा हाल्न सक्दैनौं. हामी कुनै पनि मुद्दाबाट बच्न ट्रयाकिङ सहित हुलाक सेवा लिएर पठाउने सिफारिश गर्दछौं.
कृपया ध्यान दिनुहोस कि रंगमा भिन्नताहरु परिवर्तनशील कारकहरुका कारण हुन सक्छ: पृष्ठभूमिको रंग, प्रकाश, र विभिन्न कम्प्यूटर मनिटर. नियन्त्रणात्मक दायराभित्र नपर्ने रंगमा भिन्नताहरू गुणस्तरीय मुद्दा होइनन्.
सहयोग आवश्यक छ?
तलको फारममा भर्नु होस् वा हामीलाई इमेल गर्नुहोस्. info@shekouwoman.com मा हामीलाई इमेल गर्नुहोस् र हामी यथाशक्य चाँडो फर्कनु हाम्रो उत्तम हुनेछ! यदि तपाईं हामीसँग पहिले नै आदेश राख्नुभएको छ भने कृपया तपाईँको इमेल मा तपाईँको आदेश नम्बर समावेश गर्नुहोस्.
वैकल्पिक रूपमा तपाईँले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ: + 64 4887 1260 अन्तर्राष्ट्रिय वा 04 887 1260 यदि तपाईं 9AM-2अपराह्न एनजीएसटीबाट न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ भने-बिहीवार.
कृपया ध्यान दिनुहोस: हाम्रो ओभर फोन ग्राहक सेवा हाल अंग्रेजी मा मात्र उपलब्ध छ.
सोमबार-शुक्रबार: १०एम-५.३० बजे
शनिबार: ९.३० बजे-५.३० बजे